नेपाली कांग्रेस धरानको आफ्नै पार्टी कार्यालय - Everest Daily News
नेपाली कांग्रेस धरानको आफ्नै पार्टी कार्यालय
धरान । कांग्रेसको इतिहासमै धरानमा आफ्नै पार्टी कार्यालय भवन निर्माण भएको छ । भवन निर्माणको कार्य सम्पन्न भई आन्तरिक सज्जावट गर्ने काम भईरहेको छ ।
कांग्रेस धरानका नगर सभापति तिलक राईका अनुसार महिला नेतृ एवं वडा नं. १८ बाट निर्वाचित वडा सदस्य दिलकुमारी राईले वडा नं. १७ मा भवन बनाउनका लागि निःशुल्क २५ धुर जग्गा उपलब्ध गराएकी थिईन् । सभापति राईले भने, ‘पार्टीका नेता साथिहरुले त्यहाँ अपायक पर्ने भयो, पायक पर्ने ठाउँमा भवन निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु उठ्यो, दिदिकै वडा नं. २ मा जग्गा रहेछ, अहिले ५ धुर जग्गामा तिन तलाको भवन बन्दैछ ।’ वडा नं. २ को ५ धुर जग्गा पनि नेतृ दिलकुमारी राईकै हो । वडा नं. १७ को जग्गा उहाँलाई फिर्ता गरिएको नगर सभापति राईले बताए । धरान वडा नं. २ स्थित बलबहादुर राई÷भिमबहादुर तामाङ स्मृति प्रतिष्ठानको नाममा तिन तलाको पार्टी कार्यालय भवन करिब ५० लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको छ । अब चाडै भवनको उद्घाटन गर्ने सभापति राईको भनाई छ ।
धरानमा कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशनमा १४ सय क्रियाशिल रहेको थियो भने १३ औं मा ३३ सय क्रियाशिल सदस्य रहेको थियो । १४ औं महाधिवेशन सम्म आईपुग्दा तिलक राईको नेतृत्वले ४७ सय क्रियाशिल सदस्यता बनाउन सफल भएको कांग्रेस धरानका सचिव श्याम पोख्रेलले बताए । १३ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको समितिले धरानमा पहिलो पटक उपनिर्वाचनमा जित हासिल गर्न सकेको छ । संसद विघटन विरुद्धमा नगर समितिको नेतृत्वमा विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिएको सचिव पोख्रेलले सुनाए । उनका अनुसार पार्टीको केन्द्रिय समितिको निर्देशनमा आएको हरेक कार्यक्रम यही नेतृत्वले सम्पन्न गरेको छ । उनले भने, ‘२० वटै वडामा जागरण अभियान, पार्टीको कार्यकर्ताहरुलाई हरेक सुख दुःखमा साथ दिनुका साथै कुनै पनि कार्यकर्तामा दुःखद घटना हुदाँ समवेदना पत्र लगेर सान्त्वना दिने कार्यक्रमको अभ्यास यही नेतृत्वले बसाएको छ ।’ उपनिर्वाचनमा वडा, नगर, क्षेत्रदेखि लिएर जिल्ला सम्ममा चारै तहको नेतृत्व बनाउन सफल भएको पोख्रेलको धारणा छ । १३ औं महाधिवेशनबाट आएको टिम नै १४ औं महाधिवेशनमा स्थापित गराउने सचिव पोख्रेले बताए । १३ औं महाधिवेशनमा नगर सभापति तिलक राईको समूहले ५ वर्ष भित्रमा पार्टी कार्यालय बनाउँछु भन्ने प्रतिवद्धता गरेको थियो । सोही प्रतिवद्धतालाई पूर्णता दिएको पोख्रेलको भनाई छ । पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई यही समितिले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु गराएको छ । १३ औं महाधिवेशनपछि सभापति राईको नेतृत्वले प्रत्येक वर्ष पार्टीको साधारण सभा गर्दै आएको छ । पार्टीलाई सिस्टममा लगेको छ । साधारण सभामा पार्टीको सम्पूर्ण हिसाब किताब अडिट गराएर हरेक वर्ष प्रस्तुत गर्ने गरिएको पोख्रेलले जानकारी दिए । साथै, हरेक वर्ष वनभोज कार्यक्रम र महिलालाई तीजको कार्यक्रम पनि यही समितिले आयोजना गर्दै आएको छ ।
१३ औं महाधिवेशनपछि विधानमा भएको अधिकार प्रयोग गरि हरेक वार्डमा, हरेक मतदान केन्द्रमा अधिकार प्राप्त समितिहरु निर्माण गरिएको १३ नं. वार्डका मतदान केन्द्र संयोजक आशिष कट्वालले जानकारी दिए । १३ औं महाधिवेशनबाट आएका नेतृत्वले केन्द्रिय नेताहरु ल्याएर धरानमा विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्न सफल भएको कट्वालले दाबी गरे । उनले भने, ‘पार्टीका सभापति, बरिष्ठ नेता लगायतका नेताहरु धरान आएका छन् ।’
कांग्रेस धरानका सह–सचिव एवं महिला विभाग प्रमुख पञ्चकला राईले १३ औं महाधिवेशनपछि पार्टीमा महिलाको भूमिका एकदमै सक्रिय रहेको बताईन् । उनले भनिन्, ‘१३ औं भन्दाअघि महिलाहरुको उपस्थिति कम थियो ।’ अहिलेको नेतृत्वले महिला विभागको अनुरोधमा महिलाहरुलाई प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु गराएको उनले सुनाईन् । विगतमा भन्दा अहिले पार्टीमा महिलाहरुको सक्रियता बढेर गएको उनको बुझाई छ । पार्टी संगठीत हुनुका साथै आकर्षण बढेर गएको उनले बताईन् ।
नेवि संघ महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका कावा सभापति समेत रहेका स्ववियु सचिव दोर्ची शेर्पाले अहिलेको नेतृत्वले पार्टीका भातृ संगठनहरुलाई चलायमान बनाएको बताए । उनले भने, ‘१३ औं महाधिवेशन अघि व्यक्तिवादी संगठन थियो, १३ औं महाधिवेशनपछि संगठनहरु संस्थागत भएको छ, अहिलेको नेतृत्वले चलायमान बनाएको छ, सबैलाई समेट्न सकेको छ ।’ अहिलेको नेतृत्वले उपनिर्वाचनमा जित हासिल गर्नुका साथै आफ्नै पार्टी कार्यालय निर्माण गर्न सफल भएको शेर्पाले बताए । १४ औं महाधिवेशनमा पनि यही नेतृत्व नै आउनुपर्छ भन्ने कार्यकर्ताको शुझाव छ । धरान कांग्रेस अहिले मजबुत अवस्थामा रहेको छ ।
धरानमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोध
धरान उपमहानगरपालिकाले स्व. मेयर तारा सुब्बालाई सम्झियो
निजामति सेवा विधेयक २०७५ संसदबाट फिर्ता लिनु दुःखदस् शशी श्रेष्ठ
निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले उल्टो काम गर्‍योस् सुवाष नेम्वाङ
श्रमजिवी वर्गको स्थानलाई मर्यादित बनाउनुपर्छस् विष्णु रिमाल